Ny Plugin backup backup tsara indrindra
Alahady, Septambra 18, 2011 Alarobia, Novambra 9, 2011 Douglas Karr
NAOTY: Hatramin'ny nampiasako ny MyRepono dia nifindra tany aho VaultPress. Somary lafo kokoa izy io saingy nateraky ny WordPress (nosoratan'i Automattic) ary tsy manana ny olana fonosana mahafinaritra rehetra izay ananan'ny MyRepono.
Tsy nanana plugin backup WordPress nandritra ny fotoana elaela aho. Ka… tamin'ny fotoana voalohany aho very ny database-ko WordPress nofy ratsy! Anjarako manokana… nataoko fanavaozana kely ny tahiry ary naidiko tsy nahy ny tahiry. Nanontany tena aho hoe ahoana no hataoko eto amin'izao tontolo izao hanarenana ireo bilaogiko satria tsy nanana backup aho. Narary kibo aho nandritra ny tontolo andro.
Tamin'izany aho dia niaraka tamin'i a mpampiantrano samihafa izay, soa fa nanana famerenana vonjy maika endri-javatra ho an'ny tranonkala. Famerenana amin'ny laoniny lafo izany, mitentina dolara an-jatony aho, saingy feno fankasitrahana mandrakizay aho fa afaka nahazo ny zava-drehetra afa-tsy ny lahatsoratra bilaogy farany naverina ao anatin'ny 24 ora. Taona maro taty aoriana ary namoaka lahatsoratra bilaogy mihoatra ny 2,775 izahay. Betsaka ny angona (470Mb). Betsaka loatra ny angona azo apetraka raha hametraka backupo mora fotsiny ary manantena ny hiasa isan'andro tsy misy olana. Noho izany, nitady sy nitady ireo plugin backup WordPress tsara indrindra - ary nahita azy.
Olona vitsivitsy no fantatro fa nametraka backup avy hatrany tao amin'ny mpizara tranonkala… tsy manampy anao izany rehefa very ny tranokalanao ny mpampiantrano anao! Ny fanohanana ny tanana amin'ny tanana WordPress dia fanaintainana ihany koa satria tsy maintsy mamerina ny rakitra sy ny data ianao. Ny namako hafa kosa dia nanohana ireo rakitra fa tsy niraharaha ny fametahana ny angona tahiry… teo daholo ny atiny! Mila a Plugin backup WordPress izay mampiditra ireo fiasa rehetra ireo - sy maro hafa.
Nametraka sy nanandrana izahay myRepono, serivisy fananganana herinaratra mandeha amin'ny rahona. myRepono dia serivisy tsotra dia tsotra, manome vola anao amin'ny bandwidth ampiasainao fa tsy lisansa rindrambaiko na sarany isam-bolana lehibe. Penny iray volana isam-bolana ho an'ireo tranokala kely ary latsaky ny 10 cents isaky ny backup ho an'ny tranokalako.
Ny endri-javatra MyRepono dia misy:
Fametrahana WordPress tsy misy fetrany
Famerenana ny rakitra WordPress rehetra
Famerenana ny tahiry mySQL feno
Encryption rakitra azo antoka
Fitaovana fanarenana rakitra
Famintinana rakitra voafafa
Fitantanana mifototra amin'ny tranonkala - azo idirana avy amin'ny mpitety tranonkala, na aiza na aiza
Ny mpamaky bilaogy Marketing Tech dia afaka misoratra anarana ho an'ny myRepono Androany miaraka amin'ny rohy mpiara-miasa aminay ary hahazo mari-pankasitrahana amin'ny famerenana 5 $ voalohany ianao. Tena tsara izany! Ny plugin dia naka iray minitra latsaka mba hametrahana sy hanamboarana.
Fanamarihana iray - ity dia rafitra tena tsara amin'ny fifindra-monina tranokala WordPress na bilaoginao koa!
Miova haingana ny fahazarana mizaha mailaka
Sep 19, 2011 amin'ny 7: 06 AM
Tsara tsara! Heveriko fa tsy maintsy mianatra amin'ny fomba sarotra isika rehetra, sa tsy izany? Toa hevitra tsara.
Sep 20, 2011 amin'ny 8: 07 AM
Mazava ho azy, raha manana bilaogy Compendium ianao, dia efa azo antoka izany…
Sep 20, 2011 amin'ny 8: 50 AM
Marina fa ny fanaraha-maso, ny famerana ny angon-drakitra ary ny backup ivelan'ny tranokala dia endri-javatra lehibe amin'ny serivisy ankapobeny izay tsy azonao atao!
29 Novambra 2016 à 1:14
Mampiasa BackupGuard aho mba hamerenana ny tranokalako WordPress. Plugin mahafinaritra izany! https://wordpress.org/plugins/backup/